Maalinta: Diseembar 22, 2019
CHP'li Kayışoğlu Wuxuu u imaan doonaa Bursa Train Speed ​​Speed ​​..!
Ku-xigeenka CHP Bursa Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Golaha Guud ee Barlamaanka ee wadahadalka miisaaniyadda 2020, ayuu yiri. Kayışoğlu wuxuu dhaleeceeyey tareenka xawaaraha sare ku socda ee awood u leh khudbadiisa. Khudbadiisa, CHP Kayışoğlu, Bursa, Bursa, tareenka xawaare sare ku socda [More ...]
Erdogan Wuxuu Bixiyay Taariikhda Channel-ka Channel Tender-ka
Erdo Gan wuxuu siinayaa Taariikhda Channel Tender-ka; Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, ayaa khudbadiisa ku sheegay Kulankii Dhoofinta Adeegga ee lagu qabtay Xarunta Kongareeska ee Magaalada Istanbul iyo Munaasibadda Abaalmarinta HIB A 2018, wuxuu yiri, nasıl Maadaama Suez uu adduunka joogo, [More ...]
Mid ka mid ah arrimaha ugu badan ee la is waydiin karo gudaha baaxadda Kanal Istanbul waa masiirka taallooyinka taariikhiga ah ee wadada. Warbixinta qadiimiga ah ee lagu diyaariyey mashruuca mashruuca Qiimaynta Saamaynta Deegaanka (EIA), [More ...]
Buundada Çarşlı Çavuşlu waxaa loo furay adeeg
Tababbarka Çavuşlu Bridge waxaa loo furay adeegga; Dawlada Hoose ee Magaalada Kocaeli, oo ahmiyada siisa mashruucyada gaadiidka ee xarumaha magaalooyinka, waxay fulisaa mashaariic lagu yareeynayo gaadiidaka muwaadiniinta ku nool miyiga banaanka xarunta. Sidaas awgeed, degmada Körfez Çıraklı [More ...]
İzmir wuxuu noqon doonaa xarunta duulista isboortiga
Duqa magaalada İzmir Tunç Soyer wuxuu sheegay inay fulinayaan shaqooyinka lagama maarmaanka u ah İzmir xarunta duulista isboortiga. Duqa magaalada İzmir Tunç Soyer wuxuu la kulmay xubno ka socda Naadiga İzmir Aviation Club Association [More ...]
Soojiidashada Konyalar ..! Jadwalka Imtixaanaadka Jaamacada ee Alaaddin Selçuk
Soojiidashada Konyalar ..! Jadwalka Tramç ee Jaamacadda Alaaddin Selçuk; Dowlada hoose ee Konya, shaqada dayactirka wadada tareenka waxaa la sameyn doonaa axada (berito) laga bilaabo maalinta udhaxeysa howlaha taraamka jaamacada Alaaddin-Selcuk waxaa lagu sheegi doonaa bas. [More ...]
Maanta oo ku taal Taariikhda 22 Diseembar 1885 Heshiiska u dhaxeeyay Boqortooyadii Cusmaaniyiinta iyo Baron Hirsch waa la qaboojiyey dhammaan khilaafyadii u dhexeeyey labada dhinac waa la qaboojiyey xuquuqdii shirkadda tareenka ee Rumeli waxaa la siiyay Hirsch. Bixinta saami qaybsiga saamiyada gobolka [More ...]